Shuruudaha Baasaboorada & Visa-Soo-booqdayaasha Antigua iyo Barbuda | Jinsiyadda Antigua iyo Barbuda
Shuruudaha Baasaboorada & Visa Dalxiisayaasha Antigua iyo Barbuda
Martida ku timid Antigua iyo Barbuda shuruudaha soo socda ee soo gala ayaa quseeya:
Inta badan muwaadiniinta midowga yurub (ka eeg liiska hoose) uma baahnid fiiso si ay u galaan Antigua iyo Barbuda fasax ama ganacsi. Dadka booqanaya waa loo oggol yahay inay sii joogaan illaa iyo inta ay ganacsigooda qaadanayaan, waa haddii:
a) Tani kama badna lix bilood
b) ay haystaan ​​Baasaboor ugu yaraan lix bilood ansax ah laga bilaabo taariikhda bixitaankooda
c) ay haystaan ​​tigidh kor ama ka laabasho
x) inay hayaan xaqiijin hoy
e) waxay soo saari karaan caddeyn ku saabsan awooda ay u leeyihiin inay naftooda ku sii hayaan Antigua iyo Barbuda
SHURUUDAHA VISA / KOOBAN EE ANTIGUA iyo BARBUDA
Qalabka fiisaha ayaa lagala soo bixi karaa adigoo gujinaya halkan (PDF - 395Kb).
Furitaanka Times Isniinta ilaa Jimcaha 9.30am ilaa 5.00 pm. Ballamada looma baahna. Waqtiga lagu baarayo codsiyada fiisaha waa qiyaastii 5 maalmood oo shaqo.
Codsadayaasha waxaa la ogeysiin doonaa taariikhda aruurinta mar la codsado iyo oo dhan dukumiinti taageeraya ayaa la helay oo laga shaqeeyay. Fadlan la soco, daahitaanno ku yimaada howsha ayaa dhici kara. Waqtiyada socodsiinta ee lasoo xigtey waa qiyaasta oo lama dammaanad qaadi karo. Suuragal ma aha in la dedejiyo kiis si fudud maxaa yeelay codsaduhu ma uusan siinin waqti ku filan oo arjiga lagu baaraandego.
Dadka u baahan fiisaha Antigua and Barbuda:
(Fadlan hoos ku qor ama ku xaqiiji Guddiga Sare)
Soocelinta lacag la'aanta ah ee Visa-free ee Diblomaasiyiinta, Rasmiga ah iyo / ama Dadka haysta Baasaboorka caadiga ah ee Antigua iyo Barbuda
Albania El Salvador Lesotho Saint Vincent iyo Grenadines ah
Bangaladesh * Georgia Madagascar Slovenia
Belgium Greece Malaysia Koonfur Afrika
Botswana Guinea-Bissau * Mauritius Iswidhan
Bulgaria Haiti Micronesia Tansaaniya
Kamboodiya * Hong Kong Mozambique * Togo
Cape Verde Hungary Nepal * Trinidad and Tobago
Shiinaha Hindiya Nicaragua Turkey
Colombia Iiraan ++ Norway Uganda
Costa Rica Isle of Man Panama * Imaaraadka Carabta **
Croatia Italy Peru Boqortooyada Ingiriiska
Cuba Jamaica Filibiin Uzbekistan (oo dhaqan galay 1dii Jan., 2020)
Cyprus Jordan * Poland Vanuatu
Denmark Kuuriya (Woqooyi) Qadar Venezuela
Djbouti * Kuuriya (Koonfurta) Reunion Zambia
Masar * Lubnaan * Saint Lucia
Dhulalka Ingiriiska ee Dibedda
Akotiri iyo Dhekelia Cayman Islands Montserrat Isle of Man
Bermuda Guernsey Turks iyo Caicos
Waaxaha Waaxaha Faransiiska iyo Ururinta
Faransiis Polynesia New Caledonia Wallis & Futuna
Faransiiska Koonfurta iyo Dhul-xuduudaha St. Barth's
Dhulalka kale ee ku tiirsan Yurub:
Wadamada kale ee aan u baahneyn fiisooyin inay galaan Antigua iyo Barbuda:
Korea Noorway iyo gumeysi South Korea
* Visa la siiyay markay timid ++ Visa la siiyay markii ay timid.
** Ka dhaafida Visa ee Baasaboorrada Dibloomasiga iyo Rasmiga ah
Muwaadiniinta Wadamada aan ka soo muuqan liisaska kore, waxay u baahan yihiin fiiso.
Fadlan la soco in muwaadiniinta soo socda Wadamada Barwaaqa-sooranka ay hadda u baahan yihiin fiiso si ay u galaan Antigua iyo Barbuda:
Bangladesh, Cameroon, Gambiya, Ghana, India, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone iyo Sri Lanka.
Kusoo booqda maraakiibta kuwaas oo caadiyan u baahda fiiso uma baahna mid haddii ay soo galaan Antigua iyo Barbuda aroortii oo ay ka baxaan isla fiidkii.
'Rakaabka Intransit ku safraya isla maalintaas, kuwaas oo sida caadiga u baahan fiiso, uma baahna fiiso ay ku galaan Antigua iyo Barbuda, waa haddii ay hayaan caddeyn ku saabsan safarkooda socda, isla markaana kama baxaan 'garoonka ay maamusho' ee garoonka diyaaradaha.
Diiwaangelinta ayaa loo baahan yahay markii la dalbanayo fiisaha:
Foomka buuxinta foomka.
Baasaboor ansax ah ama dukumenti safar oo wata socdaal ansax ah ama dib u galitaan dalkasta oo tigidh lagaa siinayo, sida Boqortooyada Midowday (fadlan ogow, Baasaboorku waa inuu ansax noqdaa ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda la keenay Antigua iyo Barbuda, waana inay lahaato hal bog oo maran oo ku saabsan soo bixitaanka fiisaha.)
Sawir Baasaboor midab leh oo dhowaan (45mm x 35mm).
Lacagta fiisooyinka: Galitaan kaligiis ah £ 30.00 Galitaan badan oo ah £ 40.00
Lacagta saxda ah waxaa la codsadaa haddii loo gudbiyo shaqsi si looga hortago dib u dhac.
Amarka boostada ayaa lasiiyaa Antigua and Barbuda Gudiga Sare (haddii lagu gudbiyo gudaha Boqortooyada Midowday).
Sterling International Money Order (haddii dalabka laga soo diray meel ka baxsan Boqortooyada Midowday) amarada lacagta waa in lagu bixiyaa rodol. Amarada lacagta ee nooc kasta oo kale ayaa ah ma la aqbalo.
Tijaabooyinka shaqsiyadeed MA AHAAN aqrisan
Caddaynta safarka la soo jeediyey ee ka imanaya iyo ka-bixida Antigua iyo Barbuda micnaheedu waa tigidh ama xaqiijinta ballankaaga wakiilka safarka. Fiisooyin badan oo galitaan ayaa la siiyaa oo keliya codsadayaasha soo saara caddeyn muujineysa galitaanno badan Antigua and Barbuda.
Caddaynta hoygaaga dhererka joogitaankaaga ama warqad martiqaad ah oo ka socota martidaada. Ardayda, fadlan keen waraaqda aqbalaadda ee dugsigaaga, iyo faahfaahinta halka aad joogi doonto ka hor bilowga waxbarashooyinkaaga. Shakhsiyaadka ku safraya ganacsiga, fadlan keen warqad ka timid cidda aad u shaqayso oo sheegaysa ujeeddada safarkaaga.
Si naxariis leh ku dar £ 7.00 oo loogu talagalay soo celinta boostada diiwaangashan gudaheeda gudaheeda Europe.
Caddaynta lacagaha lagu maalgaliyo safarka taas oo ah caddaymaha bangiga ee labadii bilood ee la soo dhaafay.
Diiwangalinta booliiska ayaa loo baahan karaa haddii la codsado xafiiska bixinta fiisaha.
Fadlan la soo xiriir Antigua iyo Guddiga Sare ee Barbuda wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan fiisaha iyo soo gelitaanka.